Maxaa ka soo kordhay dhaawacyadii la geeyay Turkiga? – Hornafrik Media Network
Maxaa ka soo kordhay dhaawacyadii la geeyay Turkiga?
By Liibaan Nuur	 On Dec 30, 2019
Kadib markii magaalada Ankara ee dalka Turkiga la geeyey 16 kamid ah dadkii ku dhaawacmay qarixii ismiidaaminta ahaa ee sabtigii ka dhacay Isgoyska ex-koontorool Afgooye ee magaalada Muqdisho ayaa hadana warar soo baxaya waxaa ay sheegayaan in haweynay ka mid aheyd dhaawacyada halkaasi ay Ku geeriyootay
Wararka ayaa intaasi waxaa ay ku darayaan in markii magaalada Ankara laga dejiyay dhaawacyada durba goobta ku geeriyootay Aamina Cumaan Kheyre oo dhaawaceeda uu ahaa mid culus. maanta ayaa lagu wadaa in lagu Aaso magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
Dhinaca kale dowladda Qatar ayaa maanta lagu wadaa in ay diyaarad gurmad ah u soo dirto Magaalada Muqdisho , si ay halkan uga qaado dadkii dhaawacyadu ay ka soo gaareen qaraxii maalmo ka hor ka dhacay Ex Kantarool Afgooye ee Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in ay Qatar ay maanta diyaarad ay u soo dirayso Muqdisho, islamarkaana la qaadi doono qaar ka mid ah dadka dhaawacyada qaba.
Diyaarada sidday dhaqaatiir iyo daawo oo dowladda Turkigu ay ugu deeqday dadkii dhaawacyadu ay soo gaareen ayaa shalay waxaa ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoona ay qaaday 16 ka mid dadkii dhaawacyada halista ah qabay.
Qarixii maalin ka hor ka dhacay isgoyska Ex-kantrool Afgooye ayaa sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac,iyadoo dowladda Soomaaliya ay xoogga saartay sidii dadka dhaawacyada culus qaba loogu qaadi lahaa caafimaad dibadda ah.
Al-Shabaab oo xalay lagu laayey ilaa seddax degmo oo ka kala tirsan gobolada dhaca koonfurta dalka
Tirada dadkii lagu waayey qarixii Ex-koontorool oo la shaaciyey